haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Ny Fitsarana Farany
«Ho avy ny fitsarana! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha dieny izao fa ho any amin'ny afobe ». Angamba efa nandre teny toy izany na teny mitovy amin'izany tamin'ny evanjelista nikiakiaka ianao. Ny tanjony dia ny: hitarika ny mpanatrika hanolo-tena ho an'i Jesosy amin'ny tahotra. Ny teny toa izany dia mamily ny filazantsara. Angamba tsy dia lavitra loatra amin'ny sarin'ny "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny Kristiana maro tamim-pahatsiravina nandritra ny taonjato maro, indrindra fa tamin'ny Moyen Âge. Afaka mahita sary sokitra sy sary hoso-doko maneho ireo olo-marina mitsingevana mankany an-danitra hihaona amin'i Kristy ianao sy ilay tsy marina taritin'ny demonia masiaka any amin'ny helo. Ny Fitsarana Farany kosa dia ampahany amin'ny fotopampianarana "zavatra farany". - Ireo dia mampanantena ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina, ny faran'ny tontolon'ny ratsy ankehitriny, izay hosoloin'ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra.
Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olombelona
Ny tantara dia manomboka talohan'ny namoronana ny tontolontsika. Andriamanitra dia Ray, Zanaka ary Fanahy eo amin’ny fiaraha-monina, miaina ao anatin’ny fitiavana sy ny fanomezana mandrakizay tsy misy fepetra. Tsy nahagaga an’Andriamanitra ny fahotantsika. Na dia talohan’ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona aza, dia efa fantany fa ho faty noho ny fahotan’ny olombelona ny Zanak’Andriamanitra. Fantany mialoha fa tsy hahomby isika, nefa izy no namorona antsika satria efa fantany ny vahaolana amin’ilay olana. Andriamanitra no namorona ny olombelona araka ny endriny: “Aoka isika hanao olona tahaka antsika, izay hanapaka ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny kankana rehetra izay mandady amin’ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; ary nahary azy ho lahy sy vavy » (1. Mosesy 1,26- iray).
Araka ny endrik’Andriamanitra, dia noforonina mba hanana fifandraisana am-pitiavana izay maneho ny fitiavan’Andriamanitra ao amin’ny Trinite isika. Tian’Andriamanitra isika hifampitondra amim-pitiavana ary koa hiaina ao anatin’ny fifankatiavana amin’Andriamanitra. Ny fahitana ho toy ny fampanantenana avy amin’Andriamanitra, voalaza ao amin’ny faran’ny Baiboly, dia ny hoe hiara-mitoetra amin’ny olony Andriamanitra: «Nandre feo mahery avy teo amin’ny seza fiandrianana aho, nanao hoe: Indro, ny tabernakelin’Andriamanitra mbamin’ny olona! Ary hitoetra eo aminy Izy, ary ireo ho olony, ary Izy, dia Andriamanitra momba azy, ho Andriamaniny » (Apokalypsy 2.1,3).
Namorona ny olombelona Andriamanitra satria te hizara ny fitiavany mandrakizay sy tsy misy fepetra amintsika. Ny olana fotsiny dia isika olombelona tsy te ho velona amin’ny fitiavana na amin’ny namany na amin’Andriamanitra: “Samy mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra” (Romana). 3,23).
Koa ny Zanak’Andriamanitra, izay nahary ny olombelona, ​​dia tonga olombelona mba ho velona sy ho faty ho an’ny olony: «Fa misy Andriamanitra sy Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, ​​dia Kristy Jesosy, Izay olona, ​​Izay nanolotra ny tenany ho mpanalalana. avotra ho an’ny olona rehetra, ho vavolombelony amin’ny fotoana mahamety izany »(1. Timoty 2,5- iray).
Amin’ny faran’ny taona, dia hiverina eto an-tany i Jesosy ho mpitsara amin’ny fitsarana farany. “Ny Ray tsy mitsara olona, ​​fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka” (Jaona 5,22). Halahelo ve i Jesosy satria manota sy mandà azy ny olona? Tsia, fantany fa hitranga izany. Hatrany am-boalohany dia efa nanana drafitra niaraka tamin’Andriamanitra Ray Izy mba hamerenana antsika amin’ny fifandraisana marina amin’Andriamanitra. Nanaiky ny drafitra marin’Andriamanitra momba ny ratsy i Jesoa ary niaina ny vokatry ny fahotantsika tamin’ny tenany izay nitarika ny fahafatesany. Narotsaky ny ainy mba hananantsika fiainana ao aminy: “Andriamanitra tao amin’i Kristy ka nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahotany ho azy, fa naoriny teo amintsika ny teny fampihavanana” (2. Korintiana 5,19).
Isika Kristiana mino dia efa notsaraina ary meloka. Voavela ny helontsika tamin'ny alàlan'ny soron'i Jesosy ary novelomina tamin'ny fiainana Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty. Jesosy dia notsaraina sy nomelohina teo amin'ny toerantsika amin'ny anarantsika, naka ny fahotantsika sy ny fahafatesantsika ary nanome antsika ho takalon'ny fiainany, ny fifandraisany marina amin'Andriamanitra, mba hahafahantsika miara-miaina Aminy amin'ny firaisana mandrakizay sy amin'ny fitiavana masina.
Amin'ny fitsarana farany, tsy ny rehetra no hankasitraka izay nataon'i Kristy ho azy ireo. Ny olona sasany dia hanohitra ny didim-pitsaran'i Jesosy meloka ary handà ny zon'i Kristy ho mpitsara sy sorona nataony. Manontany tena izy ireo hoe: "Tena ratsy tokoa ve ny fahotako?" Ary hanohitra ny fanavotana ny helony. Ny sasany kosa miteny hoe: "Tsy azoko atao ve ny manefa ny trosako nefa tsy mila trosa amin'i Jesosy mandrakizay?" Ny fihetsikao sy ny valinao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia haseho amin'ny fitsarana farany.
Ny teny grika nadika hoe "fitsarana" izay ampiasaina ao amin'ireo andalan-tsoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia krisis, izay niavian'ny teny hoe "crise". Ny krizy dia manondro fotoana sy toe-javatra izay fanapahan-kevitra raisina ho an'ny olona iray na manohitra azy iray. Amin'io lafiny io, ny krizy dia teboka iray amin'ny fiainan'ny olona na eo amin'izao tontolo izao. Ny tena manokana, ny krizy dia milaza ny asan'Andriamanitra na ny Mesia ho mpitsara izao tontolo izao amin'ny Andro Fitsarana farany na ny Andro Fitsarana, na azontsika lazaina ny fiandohan'ny "fitsarana mandrakizay". Tsy didim-pitsarana meloka fohy ity, fa dingana iray izay mety maharitra fotoana lava ary ao koa ny mety hisian'ny fibebahana.
Eny tokoa, ny olona dia hitsara sy hitsara tena miankina amin'ny valintenin'izy ireo an'i Jesosy Kristy Mpitsara. Hisafidy ny lalan'ny fitiavana, fanetren-tena, fahasoavana ary hatsaram-po ve izy ireo sa aleon'izy ireo tia tena, manamarina tena ary manapa-kevitra? Te hiaina miaraka amin 'Andriamanitra amin'ny fe-potoany ve ianao sa any an-toeran-kafa amin'ny fombanao manokana? Amin'ity didim-pitsarana ity, ny tsy fahombiazan'ireto olona ireto dia tsy noho ny fandavan'Andriamanitra azy ireo, fa ny fandavany an Andriamanitra sy ny fitsarany ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy.
Miaraka amin'io topimaso io, dia afaka mandinika ireo andininy momba ny fitsarana isika. Zava-dehibe ho an’ny olona rehetra izany: “Fa lazaiko aminareo fa tsy maintsy hampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana ny amin’ny teny foana rehetra izay lazainy. Ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao » (Matio 12,36- iray).
Nofintinin’i Jesosy ny fitsarana ho avy, mifandray amin’ny hiafaran’ny marina sy ny ratsy fanahy: “Aza gaga amin’izany. Ho avy ny andro handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, ka hivoaka izay nanao tsara ho amin’ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia hitsangana ho amin’ny fitsarana” (Jaona. 5,28- iray).
Ireo andininy ireo dia tsy maintsy takarina amin'ny hazavan'ny fahamarinana ara-Baiboly iray hafa; samy nanao ny ratsy avokoa ary mpanota avokoa. Tsy ny zavatra nataon'ny olona ihany no tafiditra ao amin'ilay fitsarana, fa izay nataon'i Jesosy ho azy ireo koa. Izy efa nandoa ny trosa noho ny ota ho an'ny olona rehetra.
Nofaritan’i Jesosy tamin’ny endrika an’ohatra ny toetoetry ny Fitsarana Farany: “Fa raha tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, miaraka amin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany. azy. Ary hanavaka azy Izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy, ka hametraka ny ondry eo amin’ny ankavanany ary ny osy eo amin’ny ankaviany” (Matio 2.5,31- iray).
Ireo ondry eo ankavanany dia handre ny fitahiany amin'ireto teny manaraka ireto: “Avia, ianareo izay notahin'ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay efa namboarina ho anareo hatrizay niandohan'izao tontolo izao! »(Andininy 34).
Fa maninona izy no mifidy azy? “Satria noana aho dia nomenareo hanina. Nangetaheta aho dia nomenareo hosotroiko. Vahiny aho ary nampiantranoinao aho. Tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo aho. Narary aho dia notsidihinao aho. Tany am-ponja aho ary tonga tamiko ianareo »(andininy 35-36).
Ny osy eo ankaviany dia hampandrenesina koa ny niafaran'izy ireo: "Ary dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankaviany koa izy hoe: Mialà amiko, ianareo voaozona, ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay namboarina ho an'ny devoly sy ny anjeliny!" (Andininy 41).
Ity fanoharana ity dia tsy manome antsika tsipiriany momba ny fitsarana sy ny karazana fitsarana hataony amin'ny "Fitsarana farany". Tsy misy resaka famelan-keloka na finoana ao amin’ireo andininy ireo. Tsy fantatr’ireo ondry fa nandray anjara tamin’izay nataon’izy ireo i Jesosy. Ny fanampiana ireo sahirana dia zavatra tsara, saingy tsy izany ihany no zava-dehibe na mamaritra ny fitsarana farany. Nampianatra hevitra roa vaovao ilay fanoharana: Ny Mpitsara dia ny Zanak’olona, ​​dia i Jesosy Kristy mihitsy, ary tiany ny hanampy ny sahirana fa tsy ny tsy hiraharaha azy ireo. Tsy lavin’Andriamanitra isika olombelona fa omeny fahasoavana, indrindra ny fahasoavan’ny famelan-keloka. Ny fangoraham-po sy ny hatsaram-panahy amin’izay mila famindram-po sy fahasoavana dia hovalian-tsoa amin’ny ho avy amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra izay nomena azy ireo. “Fa hianao kosa, amin’ny fonao diditra sy tsy mibebaka, dia manangona fahatezerana ho anao amin’ny andron’ny fahatezerana sy ny fisehoan’ny fitsarana marin’Andriamanitra” (Romana). 2,5).
Niresaka momba ny andro fitsarana koa i Paoly, ary nilaza izany ho “andro fahatezeran’Andriamanitra” izay nanambarana ny didim-pitsarany marina: “Izay hanome ny olona rehetra araka ny asany: fiainana mandrakizay ho an’izay mitady ny asa tsara ho voninahitra; voninahitra sy fiainana tsy mety maty; fa fahatezerana sy fahatezerana kosa ho an’izay miady sy tsy mankatò ny marina, fa manaraka ny tsy rariny » (Romana 2,6- iray).
Averina indray, tsy azo raisina ho famaritana feno ny fitsarana izany, satria tsy misy fahasoavana na finoana voalaza ao. Milaza izy fa tsy hamarinina amin’ny asantsika isika, fa amin’ny finoana. “Fa satria fantatsika fa tsy hamarinina amin’ny asan’ny lalàna ny olona, ​​fa amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy, dia tonga mino an’i Kristy Jesosy koa isika, mba hohamarinina amin’ny finoana an’i Kristy, fa tsy amin’ny asan’ny lalàna. ; fa tsy misy olona marina amin’ny asan’ny lalàna” (Galatiana 2,16).
Tsara ny fitondran-tena tsara, nefa tsy mahavonjy antsika izany. Ambara ho marina isika, tsy noho ny asantsika, fa noho isika mandray ny fahamarinana avy amin’i Kristy ka mandray anjara amin’izany: “Fa ao aminy no nanaovana anareo ho ao amin’i Kristy Jesosy, Izay tonga fahendrena ho antsika amin’ny alalan’Andriamanitra sy fahamarinana sy fahamasinana ary ho fanavotana” (1. Korintiana 1,30). Ny ankamaroan’ny andininy momba ny fitsarana farany dia tsy milaza na inona na inona momba ny fahasoavana sy ny fitiavan’Andriamanitra, izay ampahany lehibe amin’ny filazantsara kristiana.
Isaky ny misaintsaina ny fitsarana isika dia tsy maintsy mahatsiaro mandrakariva fa Andriamanitra no namorona antsika manana tanjona. Tiany isika hiara-miaina aminy ao anatin’ny fiombonana mandrakizay sy ao anatin’ny fifandraisana akaiky. «Tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia ny fitsarana; fanindroany Izy tsy niseho noho ny ota, fa ho famonjena izay miandry Azy » (Hebreo 9,27- iray).
Tsy tokony hatahotra ny fitsarana ireo izay matoky Azy sy manao ny marina amin’ny asa fanavotana nataony. Manome toky ny mpamaky azy i Jaona hoe: “Izao fitiavana izany no anatanterahana antsika, mba hananantsika fahafahana hiteny amin’ny andro fitsarana; fa tahaka Azy, dia eto amin’izao tontolo izao koa isika» (1. Johannes 4,17). Hahazo valisoa izay an’i Kristy.
Ny tsy mino izay mandà tsy hibebaka, hanova ny fiainany, ary manaiky fa mila ny famindram-po sy ny fahasoavan’i Kristy ary ny zon’Andriamanitra hitsara ny ratsy dia ny ratsy fanahy, ary hahazo fitsarana hafa: «Koa ny lanitra sy ny tany dia voavonjy amin’ny ny teny iray ilazana ny afo, voatahiry ho amin’ny andro fitsarana sy fanamelohana ny ratsy fanahy »(2. Petrus 3,7).
Ireo olona ratsy fanahy izay tsy mibebaka amin'ny fitsarana dia hiaina ny fahafatesana faharoa ary tsy hampijalina mandrakizay. Hanao zavatra mifanohitra amin'ny ratsy Andriamanitra. Amin'ny famelana antsika dia tsy mamafa ny eritreritsika sy ny teny ary ny fihetsika ratsy fotsiny izy toa ny tsy maninona. Tsia, nandoa ny vidiny isika mba hampitsaharana ny ratsy sy hamonjy antsika amin'ny herin'ny ratsy. Nijaly, nandresy ary nandresy ny vokatry ny faharatsiantsika Izy.
Ho avy ny fotoana hisarahana ny tsara sy ny ratsy ary ny ratsy tsy hisy intsony. Ho an'ny sasany, dia fotoana izay isehoan'izy ireo ho tia tena, mpikomy ary ratsy fanahy. Ho an'ny sasany dia fotoana iray izay hamonjeny azy ireo amin'ny mpanao ratsy sy amin'ny ratsy izay mitoetra ao amin'ny olona rehetra - ho fotoana famonjena izany. Mariho fa ny "fitsarana" dia tsy voatery hidika hoe "fitsarana". Midika kosa izany fa ny tsara sy ny ratsy dia voarindra ary samy hafa miharihary. Fantatra ny tsara, tafasaraka amin 'ny ratsy, ary ny ratsy aringana. Ny andro fitsarana dia fotoana fanavotana, araka ny ambaran'ireto andinin-tsoratra masina telo manaraka ireto:
“Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” (Jaona. 3,17).
“Iza no tia ny olona rehetra hovonjena sy ho tonga amin’ny fahalalana ny marina” (1. Timoty 2,3- iray).
«Ny Tompo tsy mitaredretra ny teny fikasana, araka izay heverin’ny sasany ho fahatarana; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba hahitan’ny olona rehetra ny fibebahana.”2. Petrus 2,9).
Ireo olona voavonjy izay nohamarinina tamin'ny asany fanavotana dia tsy tokony hatahotra ny fitsarana farany. Ireo izay an'i Kristy dia hahazo ny valisoany mandrakizay. Fa ny ratsy fanahy kosa ho faty mandrakizay.
Ny zava-niseho tamin'ny Fitsarana farany na ny Fitsarana Mandrakizay dia tsy mifanaraka amin'ny neken'ny Kristiana maro. Shirley C. Guthrie, teolojianina farany Reformed, dia nanolo-kevitra fa tsara ny manamboatra ny fisainantsika momba ity tranga krizy ity: Ny eritreritra voalohany ananan'ny Kristiana rehefa mieritreritra ny faran'ny tantara izy ireo dia tsy tokony hatahotra na hamaly faty. "Ao anaty" na "miakatra" na iza no "any ivelany" na "hidina". Tokony ho eritreritra feno fankasitrahana sy fifaliana fa afaka miatrika ny fotoana am-pahatokisana isika rehefa hanjaka indray mandeha ny sitrapon'ilay Mpahary, Reconciler, Redeemer ary Restorer - rehefa ny fahamarinana amin'ny tsy rariny, ny fitiavana ny fankahalana, ny tsy firaharahiana ary ny fitiavam-bola, fankahalana, zanak'olombelona amin'ny tsy maha-olombelona, ​​ny fanjakan'Andriamanitra dia handresy ny herin'ny maizina. Ny fitsarana farany dia tsy ho fanoherana an'izao tontolo izao, fa ho tombontsoan'izao tontolo izao. "Vaovao tsara izany, tsy ho an'ny Kristiana ihany, fa ho an'ny olona rehetra koa!"
Ny mpitsara amin'ny fitsarana farany dia i Jesosy Kristy, izay maty ho an'ny olona izay hotsarainy. Izy no nandoa ny sazy noho ny ota ho azy rehetra ary nanitsy ny zavatra rehetra. Izay mitsara ny marina sy ny tsy marina dia izay nanolotra ny ainy mba hiaina mandrakizay. Jesosy dia efa nandray ny fitsarana ny amin'ny ota sy ny ota. I Jesoa Kristy Mpitsara mpamindra fo dia maniry ny hananan'ny olona fiainana mandrakizay - ary nomeny an'izay rehetra vonona hibebaka sy hatoky azy izany.
Rehefa mahatsapa ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao sy mino an'i Jesosy ianao, ry mpamaky, dia afaka miandrandra ny fitsarana amin'ny fahatokisana sy fifaliana ianao amin'ny fahalalana fa azo antoka ao amin'i Jesosy Kristy ny famonjena anao. Ireo izay tsy nanararaotra nihaino ny filazantsara sy nanaiky ny finoana an'i Kristy dia hahita ihany koa fa efa nanao fandaharana ho azy ireo Andriamanitra. Ny fitsarana farany dia tokony ho fotoam-pifaliana ho an'ny tsirairay satria hitondra ny voninahitry ny fanjakana mandrakizay an 'Andriamanitra izay tsy hisy afa-tsy ny fitiavana sy ny fahatsarana mandrakizay.